Inona no atao hoe KD (Kiln-Dried) Board? - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Inona ny biraon'ny KD (Kiln-maina)?
2021 / 06 / 06 FisokajianaInterior design 7430 0
Ny tabilao KD dia fantatra amin'ny hoe tabilao KD. Izy io dia karazana tabilao vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny veneer manify vita amin'ny hazo matevina + plywood. Ny anarany dia avy amin'ny Taiwan KD Company. Satria ny orinasa KD no orinasa voalohany namolavola ity tontonana veneer hazo ity, dia nantsoina tamin'ny anarana hoe board DH izany. Androany dia hampahafantarintsika ny tabilao K Ding amin'ireo lafiny dimy manaraka.
Inona ny tabilao KD?
Mampiavaka ny Birao KD
Fampiharana ny Birao KD
Ny fizotry ny fametrahana ny tabilao KD
Ny vidiny sy ny marika amin'ny solaitrabe KD
1. Inona ny tabilao KD?
Ny anarana feno ny tontonana KD dia panina veneer vita amin'ny hazo hosodoko. Izy io dia tontonana vita amin'ny veneer hazo teknika (veneer hazo vita fanodinana). Ny hazo manta dia ampiasaina ho toy ny akora, ary aorian'ny andian-dahatsoratra, fandokoana, fanarenana, fitsaboana fanesorana bibikely, hafanana sy fanerena avo lenta, dia novokarina ho veneeran'ny teknolojia. Ny veneer eo ambonin'ny vokatra vita dia manana fahatsapana tena izy sy fijerin'ny hazo tena izy, ary tena classy.
Ny maha samy hafa ny veneer sy ny veneer panel.
Ny mahasamihafa azy roa dia ireo fitaovana samihafa ampiasaina. Ny akora ampiasaina amin'ny veneer dia betsaka kokoa noho ny an'ny KD. Mampiasa hazo, vato, vy, sns. Amin'ny fizotry ny famokarana, ny veneer dia mifamatotra sy tsindry, noho izany dia hafa ihany koa ny fitsaboana eo amin'ireo takelaka roa. Misy ihany koa ny fahasamihafana eo amin'ny roa tonta. Amin'ny ankapobeny, ny tabilao KD dia lafo kokoa ary mety kokoa ho an'ireo mpanjifa haingo avo lenta.
2. Mampiavaka ny tabilao KD
Fomba manankarena sy tsara tarehy.
Betsaka ny karazana veneer hazo mafy eo ambonin'ny tabilao KD. Ny veneer hazo tany am-boalohany dia manankarena volon-koditra voajanahary sy haavon'ny endrika telo-habe. Ny velaran'ny vatan-kazo matevina ao amin'ny tabilao KD dia manana fahatsapana ho marokoroko sy convex. Ny fahatsapany dia manakaiky kokoa ny voam-bary tany am-boalohany, ary ny lamina amin'ny voa dia voajanahary kokoa.
Sariaka amin'ny tontolo iainana sy tsy misy loto.
Ny toerana famokarana ny KD Board dia tsy misy loko vita amin'ny tsifotra intsony, noho izany dia tsy misy loto amin'ny vovoka avy amin'ny loko sy ny fasika. Ny tabilao ampiasaina ao amin'ny Birao KD dia mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly. Tsara kokoa noho ny fanamarinana nasionaly E1 (fenitra taloha E0) io. Ny famoahana formaldehyde dia ambany kokoa noho ny fenitra takiana amin'ny firenena. Izy io dia sariaka amin'ny tontolo iainana sy tsy misy loto, ary azo ampiasaina amin'ny endrika anatiny miaraka am-pahatokisana.
Ny sakany amin'ny fampiharana.
Ny tabilao KD dia afaka manome tsipelina isan-karazany, fitsaboana amin'ny endriny ary habeny namboarina mifanaraka amin'ny fepetra famolavolana. Ampiasaina be any an-tampon-trano anatiny izy io, eo amin'ny tataon-drindrina, sns. Tsy vitan'ny hoe manao akanjo mitovy amin'ny fomba sy ny fomba fotsiny ny efitrano iray manontolo, fa mora ihany koa ny mametaka toerana tsy ara-dalàna toy ny endrika miolikolika.
Milamina sy mateza.
Ny fampiasana ny loko miorina amin'ny rano miditra dia mamela ny fitambarana loko sy veneer hazo tsara indrindra. Manana firaiketam-po tena tsara izy io. Miaro ny veneer ny lokon'ny loko ary mora tohina amin'ny hamandoana. Ny androm-piainany dia mihoatra ny avo roa heny noho ny an'ny fomba nentim-paharazana.
Mazava ho azy fa misy ihany koa ny fatiantoka sasany. Ohatra, ny vidin'ny tabilao KD dia lafo kokoa. Izy io dia ny tontolon'ny veneer vita amin'ny marika Taiwan Co. Ny fitaovana akora fotsiny no lafo. Ka na dia tsara aza ny vokatry ny haingon-tsoratry ny tabilao Koding, ho an'ny mpanjifa manana haingo avo kokoa ihany.
Ny fizotry ny fametrahana dia bebe kokoa, Ny KD mihitsy dia tontonana veneer. Mila amboarina amin'ny fotony. Ity dia dingana iray hafa, ary ny fikolokoloana dia manahirana kokoa.
3. Fampiharana ny tabilao KD
Ny fampiharana ny tabilao KD dia tena malalaka, azo ampiasaina amin'ny fanamboarana rindrina iray manontolo, haingon-trano ambony, kabinetra manokana, tontonana varavarana, sns.
a. ravaky rindrina iray manontolo
Ny tabilao KD feno haingon-trano feno rindrina dia afaka mitana andraikitra amin'ny fiarovana ny rindrina ary manatsara ny vokatra hatsarana. Izy io dia azo ampifanarahana amin'ny fomba ankapobeny, ampiharina amin'ny fomba minimalista, fomba italiana minimalista, sns.
b. Haingo ny rindrina any ambadika
Ny rindrina aoriana dia ivon'ny fahitana amin'ny endrika anatiny. Faritra lehibe amin'ny solaitrabe KD eo amin'ny rindrina, modely tsotra nefa tsy very fomba. Indrindra rehefa misy maodely manokana, ny fampiasana ny haingon-tsoratry ny tabilao KD dia tsara kokoa.
c. Varavarana tsy hita maso namboarina
Rehefa mila mampiditra ny varavarana tsy hita maso ny maodelin'ny rindrina, ampiasao ny tabilao KD hanaovana ny fanaingoana iray manontolo, tsy vitan'ny hoe tsy misy akony amin'ny estetika, fa koa ny varavarana sy ny rindrina azo ampidirina tsara.
d. Kabinetra / fanaka namboarina
Rehefa mila manamboatra endrika hazo maro ao an-trano ianao dia mora ny manana tsy fitoviana amin'ny fitaovana sy ny firafitra. Fa ny fampiasana ny fanjanahana birao KD dia afaka misoroka tsara an'io. Afaka mampiasa ilay firafitra mitovy amin'ny rindrina mankany amin'ny trano izy, izay mamaha tanteraka ny henatra ateraky ny fahasamihafana ara-materialy.
Ny akora ambonin'ilay fanaka dia azo atao amin'ny tabilao KD ihany koa. Aorian'ny fanangonana ny endrika fanaka amin'ny alàlan'ny tabilao fototra, dia voaravaka ny farany.
4. Ny fizotry ny fametrahana ny tabilao KD
a. Fananganana rindrina birao KD
Dingana fanorenan-trano: tapaho ny solaitrabe araka ny habeny —- hametaka ao ambadiky ny tabilao —- refesio ary asio marika ny toerana misy ny paty —- tapaho ny lamba tsy voatenona arakaraka ny habeny — apetaho ilay lamba tsy tenona - - apetaho ny takelaka fanakonana —- tapitra rindrina
①Tapaka ny tabilao KD arakaraka ny habeny takiana, ary lokoy amin'ny loko zorony ny faritra voapaika ary avelao izy hijoro mandritra ny 10 minitra, ary aorian'izay dia apetaka.
②Ny ampahany amin'ny rindrina dia voamariky ny refy fandrefesana sy ny tsipika fanaovana ranomainty ho an'ny fametahana toerana, aorian'ny fahavitan'izy ireo, manapaka ny lamba tsy tenona amin'ny antsy fialamboly, apetaho eo amin'ny rindrina ny lamba tsy tenona ary apetaho tsara amin'ny takelaka fanaovana gazety ny lamba tsy tenona. apetaho amin'ny takelaka mifanentana amin'ny rindrina ny takelaka K Ding voapaika, ary paiso moramora amin'ny palma sy spacer hazo, esory ny sarimihetsika mametaka amin'ny tabilao K Ding ary hamita ny fanamboarana ny rindrina.
b. Fananganana kabinetran'ny birao K Ding
Dingana fanamboarana: tapaho ny takelaka K Ding arakaraka ny habeny —- K Ding takelaka paty miverina ao amin'ny lamba —- manamboatra ny sisiny mba hilamina —- manapaka ny lamba tsy misy tenona sy ny lakaoly borosy —- Mametaka lamba tsy voatenona ary manety ny sisiny —- loko zoro zorony --- vita ny kabinetra
① dia tsy maintsy ny fototry ny fivorian'ny kabinetra dia vita aorian'ny tabilao Koding mifanaraka amin'ny habe takiana amin'ny fanapahana. Aorian'ny famaranana ny fanapahana, ny vatan'ny kabinetra dia ho vonona laminated ary hosodoko amin'ny dity mahery ny vodin-tsambo. Afangaroy amin'ny vata fampangatsiahana avy eo ny takelaka, ary kapohy moramora amin'ny hama sy ny spacer izy ireo mba hampifangaroana tanteraka ny paty.
② Mampiasà antsy hametahana ireo takelaka be loatra eo amin'ny sisiny ary ampiasao taratasy vita amin'ny fasika handosirana azy. Avy eo ny kabinetra mametaka takiana ao ambadiky ny lamba tsy tenona misy sary hoso-doko mahery. Aorian'izany, tapaho ny antsy ilaina amin'ny antsy fialamboly. Avy eo apetaho eo anilan'ny kabinetra ilay lamba tsy tenona notapahina ary apetaho tsara amin'ny tabilao fanaovan-gazety. Hetezo amin'ny antsy fialamboly ny lamba tsy tenona be loatra. Fasika misy akorandriaka grit 240 sy 400, arahin'ilay loko zorony. Ary farany, rehefa avy nandingana moramora tamin'ny valin'ny spaonjy 800, dia vita ilay kabinetra.
05.Ny vidiny sy ny marika amin'ny solaitrabe KD
Ny haben'ny fenitra takelaka KD dia 1220mmx2440mm, miaraka amin'ny hatevin'ny 5mm ka hatramin'ny 25mm. Miovaova arakaraka ny 200-400 yuan ny vidiny.
Ny sary farany dia mamintina ny atiny androany.
Tagkd hazotakelaka maina maina Previous :: Tononkira Morandi, Fandikana ny Zen Atsinanana + Estetika Maoderina | YORO Yorong Design Next: Ny famaritana ny fahatakarana sy ny rendrarendra, ny fandikana ny toerana mahafinaritra toa ny zavakanto | TT Design
2021 / 08 / 15 3490
2021 / 08 / 14 4023